Taariikh Nololeedka Wiilka Reer Kapoor Ku Fanaan Ranbir Kapoor Iyo Waayihiisa Fanka Ee Kala Duwan oo Update ah | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Wiilka Reer Kapoor Ku Fanaan Ranbir Kapoor Iyo Waayihiisa Fanka Ee Kala Duwan oo Update ah
Dhalasho Wacan Ranbir Kapoor Oo Maanta 35-sano jirsaday:
Hordhac: Taariikhdaan Horey Ayaan Usoo Bandhigay Balse Dib Ayaan Ugu Soo Celinay Ayadoo Update Ah:
Ranbir Kapoor waa atoore Bollywood-ka ka tirsan wuxuuna dhashay 28 September sanadii 1982, haatan waa 35-jir Bollywood-ka mudo gaaban heerkii ugu sareeyay ka gaaray sidoo kalena shacbiyad balaaran ku leh gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Ranbir wuxuu caan ku yahay sameynta filimo fariin wacan xambaarsan sidoo kalena xidigan wuxuu ku guuleestay abaal marino badan asigoo ku guuleestay 5-jeer abaal marinta Filmfare Awards qaybaheeda kala duwan.
Ranbir Kapoor waa wiilka ay haatan qoyska Bollywood-ka soo askumeen (Kapoor Family) ku faanaan waxaana aabe u ah Rishi Kapoor halka hooyo ay u tahay Neetu Singh sidoo kalena xidigan waxaa awoowe u ah Super Star-kii Raj Kapoor halka ay ilmo adeero yihiin Kareena Kapoor iyo Karishma Kapoor.
Ranbir Kapoor labo jeer oo isku xigto ayuu ku guuleestay atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka intii u dhaxeesay 2011 iyo 2012 sidoo kalena waa xidig filimadiisa darajo ahaan dhanka Boxoffice-ka heer sare gaareen.
Ranbir Kapoor Iyo Bilawgii Noloshiisa Marxaladaha Ay Soo Martay:
Ranbir waa wiil ay waalid u yihiin Rishi Kapoor iyo Neetu Singh oo Bollywood-ka heer sare ka gaareen 70-kii iyo 80-kii.
Ranbir wuxuu ku dhashay magaalada Mumbai waxaana ka weyn gabar la dhalatay oo lagu magacaabo Riddhima Kapoor.
Ranbir markii uu yaraa wuxuu waxbarasho u doontay iskuulka lagu magacaabo Bombay Scottish School lakiin wiilkan waxbarashada ma jecleyn midaasna waxay sababtay inuu xili hore waxbarashada isaga haro.
Ranbir waxaa la sheegay in dartiisa ay labadiisa waalid isku dagaali jireen madaama uu ahaa wiil waxbarashada neceb midaasna waxay sababtay in qoyskan marwalbo dagaal ka dhex dhasho.
Waxaa laga soo xigtay in Ranbir uu aad ugu dhawaan jiray dhanka hooyadiisa halka uusan xiriir wanaagsan la lahaan jirey aabihiis Rishi Kapoor markii uu dhalinta yaraa.
Waxaa la sheegay in Ranbir Kapoor uu si dhib badan ku dhameestay fasalka 10-aad kadibna wuxuu bilaabay inuu waalidkiisa u jecel yahay noqoshada jilaa Bollywood-ka ka tirsan.
Ranbir sanadii 1999 wuxuu aabihiis Rishi Kapoor kala qayb qaatay sameynta filimkii Aa Ab Laut Chalen asigoo Ranbir Director caawiye filimkan ka ahaa.
Ranbir waalidkiisa ayaa ku adkeesteen inuu wax barsahada sii wato waxayna ku qasbeen inuu wax ka barto H.R. College of Commerce iyo Economics, kadib wiilkan magaalada New York ayuu u guuray si uu filim jilista iyo fanka qaybihiisa kale duwan uga barto.
Sanadii 2005 Ranbir markii uu Mumbai kusoo laabtay wuxuu Director caawiye ka noqday filimkii Black ee uu Sanjay Leela Bhansali iska lahaa waxaana wada jileen filimkan Amitabh Bachchan iyo Rani Mukerje.
Ranbir Kapoor Iyo Markii Ay Riyadiisa U Rumowday Ee Uu Noqday Atoore Caan Ah (2007 – 2010)
Kadib markii Ranbir uu Director Sanjay Bhansali kala shaqeeyay filimkiisii Black xidigan wuxuu saxiixday inuu atoore kowaad ka noqdo filimkii Saawariya oo ay Sonam Kapoor kula soo caan baxday waxaana iska lahaa Sanjay Bhansali.
Inkastoo filimkiisii kowaad Saawariya uu Ranbir ka noqday mid guul dareestay madaama tiyaatarada isku maalin lala saaray filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Om Shanti Om hadana Ranbir qaab jilinkiisa si guud ahaa loo amaanay wuxuuna xidigan ku muteestay filimkan in lagu siiyo abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee Bollywood-ka ku cusub ee shirkada Filmfare Awards bixiso (Best Male Debut).
Madaama Ranbir qaab jilinkiisa lala isla arkay shirkada weyn Yash Raj Films oo heshiis la gaartay wuxuuna u sameeyay filimkii guusha wacan gaaray Bachna Ae Haseeno.
Bachna Ae Haseeno guul wacan ayuu gaaray waxaana Ranbir Kapoor filimkan jeceylka sedex geesoodka ah la jileen Bipasha Basu, Minissha Lamba, iyo Deepika Padukone.
Ranbir guushii uu u baahnaa markii uu helay xidigan shirkado kala duwan ayuu la saxiixday wuxuuna sanadii 2009 la yimid sedex filim oo kala duwan.
Filimkiisii kowaad Wake Up Sid ee uu Ranbir la sameeyay Konkana Sen Sharma guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray balse bandhigiisii wacnaa inta laga yaabay ayay shirkada Filmfare siisay abaal marinta Filmfare Critics Award for Best Actor oo ah abaal marinta la siisiyo atooraha gafo bilada kowaad ee atooraha ugu wanaagsan micnaha waa bilada la siiyo atooraha labaad ee ugu qaab jiliinka wanaagsan.
Ranbir sanadii 2009 filimkiisii xigay Ajab Prem Ki Ghazab Kahani wuxuu noqday Super Hit weyn waana filimkii ay isku fahmeen saaxiibtiisii hore Katrina Kaif oo ay mudo wax isla wadeen.
Balse fillimkii ugu dambeesay ee Ranbir sanadii 2009 la yimid Rocket Singh: Salesman of the Year qaab jiliin ahaan aadbaa loo amaanay balse ganacsi ahaan waa filim guul dareestay.
Ranbir Kapoor ayaa sanadii 2010 la yimid filimkii weynaa Raajneeti ee Director Prakash Jha iska lahaa inkastoo filimkan ragg culus la isugu keenay sida Nana Patekar, Ajay Devgn, Arjun Rampal, Manoj Bajpayee hadana Ranbir door wacan ayuu ka qaatay filimkan wuxuuna noqday Super Hit weyn.
Filimkii Raajneeti wuxuu ganacsi ahaan keenay 143 Crore ($21 million) sidoo kalena Ranbir Kapoor markii sedexaad ayuu u suura galiyay filimkan inuu u tartamo abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Awards bixiso.
Dhamaadkii sanadii 2010 Ranbir Kapoor wuxuu la yimid filimkii jeceylka iyo shactirada isku jiray Anjaana Anjaani oo ay Priyanka Chopra la sameesay.
Nasiib daro Anjaana Anjaani hamigii laga qabay ma gaarin wuxuu noqday filim ganacsi dhex dhexaad ah sameeyo darajo dhex dhexaad ah gaaray.
Ranbir Kapoor Iyo Markii Uu Ku Dhawaaday Inuu Darajada Super Star Gaaro Iyo Abaal Marinada Uu Qaatay (2011 – 2013)
Ranbir Kapoor dhamaadkii 2011 wuxuu la yimid filimkii sheekadiisa sida weyn loola dhacay Rockstar ee uu Direcor Imtiaz Ali iska lahaa.
Rockstar wuxuu ahaa filim ganacsi ahaan guuleestay kaasi oo isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka kasoo xareeyay 1.07 Crore ($16 million).
Laakiin Rockstar waa filim Ranbir qaas u ah madaama uu fiimkan u suura galiyay markii ugu horeesay inuu atooraha ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Awards bixiso.
Ranbir Kapoor oo noqday atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka ayaa sanadii 2012 la yimid filimkii Classic noqday sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan Barfi!
Filimka Barfi! gudaha Hindiya oo kaliya ayuu kasoo xareeyay 100 Crore ($15 million) ka badan sidoo kalena daafaha caalamka guul weyn ayuu ka gaaray wuxuuna noqday Super Hit weyn.
Qaab jilinkiisii Barfi ee Ranbir Kapoor wuxuu noqday mid Classic ah asigoo weliba ku guuleestay abaal marinta qaybta atooraha ugu wanaagsan ee shirkad walbo bixiso sida Filmfare, Screen, IIFA iyo kuwo kale.
Kapoor waxaaba la isku raacay inuu noqon doono Super Star-ka mustaqbalka meesha kala wareegi doono Sedexda Khans, Hrithik Roshan, Akshay Kumar iyo Ajay Devgn.
Waayo xidigan sanadii 2013 wuxuu sameeyay filimkiisii ugu horeeyay ee Blockbuster weyn noqday Yeh Jawaani Hai Deewani oo ay Deepika Padukone la sameesay.
Yeh Jawaani Hai Deewani waxaa la daawaday bishii May sanadii 2013 weliba ayadoon wax fasax ah jirin wuxuuna dhigay iskoor caalami ah taasi oo soo dadajisay in Ranbir loogu yeero Super Star-ka cusub ee hogaanka Bollywood-ka la wareegtay.
Yeh Jawaani Hai Deewani wuxuu isku dar ahaan gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka kasoo xareeyay lacago gaarayo 302 Crore ($45 million) wuxuu sameeya ganacsi lixaad ah sidoo kalena filimkan wuxuu Ranbir ka caawiyay inuu u tartamo abaal marinta atooraha ugu wanaagsan markale sida joogtada u noqotay.
Ranbir Kapoor Iyo Markii Ganacsi Ahaan Hoos U Dhac Weyn Qabsaday (2013 Ilaa Haatan):
Kapoor oo magaciisa cirka galay sidoo kalena filim sameeyayaasha ka dalbanaayo lacagaha uu doonao jawi wacana ku jiro ayay hal mar wax badan ka qaldameen.
Waayo xidigan filimkiisii xigay ee uu sanadii 2013 la imaaday wuxuu ahaa Besharam qof walbo wuxuu aaminsanaa in filimkan guul weyn gaari doono madaama Ranbir ku jiro waqtigiisii ugu wacnaa.
Balse Besharam oo ay Ranbir xitaa aabihiis iyo hooyadiis wax kala jileen wuxuu noqday filim ganacsi ahan iyo sheeko ahaan bur buray waxaana lagu tilmaamay filimkii ugu sheekada liitay ee uu xidigan sameeyay!
Ranbir Kapoor sanadii 2014 oo dhan wax filim ah la imaanin balse sanadii sanadii 2015 wuxuu la yimid sedex filim oo sheeko ahaan kala duwan laakiin culeeska ayay kusii badiyeen madaama ay dhamaantooda wada guul dareesteen.
Bilawgii sanadii 2015 Kapoor wuxuu la yimid filimkii Roy oo ay la wada sameeyaan Arjun Rampal iyo Jacqueline Fernandez laakiin filimkan ganacsi ahaan wuu guul dareestay sidoo kalena sheekadiisa dadka wey iska diideen.
Ranbir Kapoor wuxuu bishii May ee sanadii 2015 la yimid filimkii lacagaha faraha badnaa lagu qarash gareeyay Bombay Velvet oo ay la jileen Anushka Sharma iyo Karan Johar.
Bombay Velvet gabi ahaanba dadka Hindiga sheekadiisa wey iska diideen wuxuuna noqday filim sheekadiisa aad u liidato waxaana laga kulmay qasaaro taariikhi ah waayo 120 Crore ($18 million) ayaa lagu sameeyay wuxuuna keenay lacago 23 Crore gaaray sidaa darteed waxaa lagu tilmaamay filimkii ugu qasaaraha badnaa oo ay ebid Bollywood-ka sameeyaan!
Kapoor dabyaaqadii sanadkii hore wuxuu la yimid filimka jeceylka ah Tamasha oo ay isla jileen xidigta ay nasiibka isku leeyihiin Deepika Padukone.
Inkastoo filimkan sheekadiisa la aamanay sidoo kalena Kapoor qaab jiliin wacan ka muujiyay hadana Tamasha waa mid ganacsi ahaan guul dareestay oo rajo beel ku riday Ranbir.
Ranbir Kapoor 2016 wuxuu la yimid filim xoogaa culeeska ka dajiyay waana Ae Dil Hai Mushkil oo ay la sameeyeen Aishwarya Rai Bachchan iyo Anushka Sharma.
Filimkaan jaceylka sedex geesoodka ah Karan Johar sameeyay Hit ayuu noqday ayadoo 2016 la daawaday xiligii Feestada Diwali weliba Ajay Devgn filimkiisii Shivaay oo tiyaatarada lala saaray ayuu ka guuleestay.
Laakiin RK guushii Ae Dil Hai Mushkil wuu joogteen waayay madaama sanadkaan 2017 uu la imaaday filimka Jaga Jasoos oo ay la jishay jaceylkiisii hore Katrina Kaif kaasi oo Flop noqday.
Jaga Jasoos wuxuu ahaa filim waqti ahaan soo daahay oo sedex sano ka hor shaqadiisa la bilaabay daawadayaashana wey iska diideen.
Sidaa darteed Ranbir Kapoor kaliya filimka Ae Dil Hai Mushkil ayaa ganacsi ahaan u guuleestay tan iyo sanadii 2013 midaasna waxay hoos u dhigtay awoodiisa Boxoffice-ka Star Power ahaan oo markii hore xawli aan caadi ahayn ku socotay.
Ranbir Kapoor Oo Doonay Filimka Sanjay Dutt Noloshiisa Looga Hadlaayo Inuu Kusoo Laabto:
Dood kama taagno in RK uu yahay atooraha ugu xirfada wanaagsan dhalinta Bollywood-ka asigoo door walbo sameyn karo laakiin Boxoffice-ka ayaa ah halka kaliya ee jilaaga u ogolaan karo inuu Bollywood-ka baaqi kusii ahaado.
Sidaa darteed Ranbir wuxuu aqbalay sameynta mashruuca halistiisa wato waa filimka aan magaca loo bixin ee Sanjay Dutt noloshiisa looga hadlaayo.
Filimkaan hadal heyntiisa cirka ayay mareysaa sidoo kalena RK wajiyo kala duwan ayuu ku matalayaa filimkaan waxaana lagu qabaa kalsooni weyn inuu ganacsi adag sameyn karo marka tiyaatarada la saaro 30 Maarso 2018 madaama uu Director ka yahay Rajkumar Hirani oo guusha u saaxiib ah wuxuuan Hirani horey u sameeyay filimada taxanaha Munna Bhai, 3 Idiots iyo PK oo dhamaantooda Hits waa weyn noqdeen.
Nasiib wacan iyo soo laabasho wanaagsan Ranbir Kapoor oo maanta sanad guuradiisa u dabaal dagayo…
Ranbir Kapoor Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Ranbir waa xidig noloshiisa gaarka ah in badan is bad badashay waxaa la sheegay markii uu fanka ku cusbaa inuu Sonam Kapoor jeceyl la wadaagay.
Kadib Ranbir wuu ka dalacay Sonam wuxuuna ku dhagsaday Deepika oo ay isk fahmeen filimkii Bachna Ae Haseeno sanadii 2008 balse mudo markii ay jeceyl heer sare ah isla wadeen hadana Ranbir ayaa Deepika meel cidlo ah kaga tagay.
Waxaana lagu eedeeyay xidigan inuu Deepika qalbiga ka dhaawacay asigoo xiriir cusub la wadaagay Katrina Kaif.
Ranbir iyo Katrina mudo 6-sano ayay saaxiibo ahaayeen waxayna gaareen heer ay hal aqal magaalada Mumbia ka dagaan.
Waxaana afka lagu haayay inay si guursan doonaan balse bilawgii sanadkan ayay kala boodeen lama ogo sababta rasmiga ah ay u kala tageen.
Balse Katrina ayaa la sheegay inay ka carootay in Ranbir uu sanadkii hore Deepika waqti wacan la qaatay xili ay filimkoodii Tamasha xayeysiin u sameenayeen.
Sidoo kale Katrina ayaa ku andacootay inay Ranbir dhankiisa damaanad qaad ka weysay dhanka xiriirkooda sida loo hormarin lahaa iyo qaabka ay isku guursan lahaayeen.
Haatan Ranbir nolosha kali ayuu ku yahay wuxuuna dib ugu laabtay waalidkiisa asigoo haatan la nool hooyadiis iyo aabihiis.
Waxaa Aqrisay 1,789